उत्तर कोरियाको चेतावनी ! दक्षिणलाई हटाएर सिधै अमेरिकासँग वार्ता – Kantipur Press
उत्तर कोरियाले सउल र वाशिंगटन डी.सी. को बीच हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यास लाई लिएर धम्की दिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका सँग भविष्यमा हुने वार्तामा दक्षिण कोरियालाई अलग गराउने चेतावनी उत्तर कोरियाको एक अधिकारीले दिएको हो ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाको वार्ताको समन्वय दक्षिणले गर्दै आएको छ ।उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालय अमेरिकी मामला विभागको महानिदेशक क्वोन जोंग गनले चेतावनी दिएको छ की “यदि अभ्यास जारी राख्ने हो भने भविष्यमा हुने वार्ता डीपीआरके र अमेरिकाको बीच सिधै हुनेछ, उत्तर र दक्षिणको बीच होइन”।
क्योनका अनुसार यस्तो सैन्य अभ्यासले अझै दुई कोरिया बीचमा दुश्मनी रहेको देखाउँछ । यस्तो सैन्य गतिविधिले कोरियाली प्रायद्धीपमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने भन्दै उनले भने “विना कुनै ठोस आधार गरिने यस्ता अभ्यासले अन्तर कोरिया सम्बन्धलाई राम्रो बनाउदैन ।”
कोरियाली संचार माध्यम अनुसार विगतमा दक्षिण कोरिया र अमेरिका वीच हुँदै आएको “अलायंस 19-2” लाई नाम मात्र बदलेर “दक्षिण कोरिया-यू.एस. क्बाइन्ड कमांड पोस्ट एक्सरसाइज” राखेर सैन्य अभ्यासको ढाकछोप गर्न लागेको आरोप उत्तर कोरियाको रहेको छ ।
किम जोंगले ३ पाने चिठी लेखेर सैन्य अभ्यासको विरोध यसै विच गत शनिवार प्रकाशित समाचार अनुसार यू.एस. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाको नेता किम जोंग उनको पछिल्लो हप्ता प्राप्त तीन पान्ने पत्रमा सैन्य अभ्यासको आलोचना गरेको खुलासा गरेका थिए ।
लामो पत्रमा हास्यास्पद तथा महंगी अभ्या भन्दै यसको बारेमा गुनासो गरेको जनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त अभ्यास समाप्त पछि लगत्तै किमले वार्ता शुरू गर्न चहेको दाबी पनि ट्रम्पले गरेको छ ।अमेरिका र उत्तर कोरिया वीच बिगतमा भएको २ चरणको वार्ता पछि फेरि हुन सकेको छैन । गत महिना दुई कोरियाको सिमा क्षेत्रमा ट्रम्प र किम वीचको अप्रत्याशित भेटवार्ताले फेरि चाँडै शिखर वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।तर अझै हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय सउल र वासिङ्टन डिसीले गर्दै आएको सैन्य अभ्यासको विरोध उत्तरले गरिरहेको छ भने उत्तरले जारी राखेको छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परिक्षणको विरोध दक्षिणले गर्दै आएको छ । यसरी दुई कोरिया बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहदा कोरियाली प्रायद्धीपको शान्ति प्रक्रिया भने अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
फुस्रा नारा ,फुस्रा भाषण, शुन्य काम… एनआरएनए कोरियाको अर्को नाम